တစ်နေ့ကိုမိနစ်(၂၀)အချိန်ပေးရုံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအချိုးညီညီအဆီကျသွားစေမယ့် နည်းလမ်း(၄)သွယ် - For her Myanmar
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝလာမှန်းလည်း ရိပ်မိတယ်.. Gym သွားဖို့လည်းဘယ်လိုမှ အချိန်မပေးနိုင် ၊ အိမ်မှာဆော့ဖို့ ကျပြန်တော့လည်း စက်ကိရိယာလိုတာနဲ့၊ ပုံစံမှားဆော့မိမှာ စိုးရိမ်ရတာနဲ့ ဟိုဟာ တွေးပူရတာနဲ့၊ ဒီဟာစိတ်ပူရတာနဲ့ အတွေးပေါင်းစုံတွေကြောင့် ဝသည်ထက် ပိုပိုဝလာတာကို ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နရေတဲ့နေ့တွေ များနေပြီလား ယောင်းရေ…
ယောင်းတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဟောဒီကမင်မင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါသတဲ့ရှင် …. ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ လုပ်ဖို့ တစ်နေ့ကိုမိနစ်(၂၀)အချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးညီညီညာညာနဲ့ ဝိတ်ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်တဲ့လေ… အဓိကကတော့ ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းသွားအောင် လုပ်ရင်း အဆီတွေကိုေ လျှာ့ချပေးလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပေါ့… ကဲ.. ဒါဆို ဘယ်နည်းလမ်းလေးတွေလည်း ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
Related Article >>> တင်ဘေးသားတွေ ကားထွက်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၄) မျိုး
တော်တော်များများက ဒီနည်းလမ်းကို ကြောက်ကြပေမဲ့ ဒီနည်းလောက်ထိရောက်တာလည်း ဒီနည်းလမ်းပဲ ရှိတယ် ယောင်းရေ။ နေရာလည်း သိပ်မယူသလို ဘာကိရိယာမှမလိုဘဲ ကယ်လိုရီမြန်မြန်လောင်ကျွမ်းစေမှာပါ။ ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
၁။ မတ်မတ်ရပ်နေပါ။ ဒိုက်ထိုးတဲ့ ပုံစံအတိုင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ထောက်လိုက်ပါ။
၂။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ကို အားနဲ့ကန်ပြီး ဒိုက်ထိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ပြင်လိုက်ပါ။ (ကျောဖြောင့်နေပါစေနော်.. )
၃။ နောက်မှာထောက်ထားတဲ့ ခြေထောက်တွေကို အရှေ့ကို ပြန်ဆွဲယူလိုက်ပါ။
၄။ မတ်မတ်ပြန်ရပ်ပါ။ ပြန်ရပ်တဲ့အချိန်မှာ ခြေဖျားထောက်ပြီး လက်တွေကိုပါ ဆန့်ထုတ်လိုက်ပါ။ (လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ခုန်နိုင်သလောက် မြင့်မြင့်ခုန်လိုက်လည်း ရပါတယ် ယောင်းရေ.. ခုန်တဲ့အခါမှာ တစ်ကိုယ်လုံး ဆန့်ထားဖို့ လိုပါတယ်)
ဒါက အခြေခံအဆင့်တွေပါ။ Burpees ဟာ အမြန်နှုန်းကို အခြေခံတာမို့ မြန်မြန်လုပ်နိုင်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒစောပြီး မြန်မြန်ကြီးလည်း မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ စစလုပ်ချင်းဆို နည်းနည်းလောက် လုပ်ပြီးတာနဲ့ လူက ပြိုင်းကျသွားမှာ ကျိန်းသေပါပဲ 😛 လုပ်နိုင်သလောက် အရင်လုပ်ပါ။ နောက်ပိုင်း အကျင့်နည်းနည်းရသွားပြီဆိုရင် တစ်ခါလုပ်ရင် အခေါက် ၅၀ လောက် အနည်းဆုံး လုပ်ကြည့်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးရင်း ၁၀၀ လောက်ထိ လုပ်လည်း ရပါတယ်နော်…
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ သာမန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေထက် ၅၀% ပိုပြီး အဆီတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကယ်လိုရီတွေကိုလည်း ပိုပြီး လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ပေါင်အတွင်းသား၊ တင်ပါး၊ တံခေါက်ကြောနဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ကျစ်လျစ်သန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
၂။ Jump Rope
ယောင်းက ငယ်ငယ်လေးတည်းက ကြိုးခုန်ဝါသနာပါခဲ့ရင်တော့ ဒီနည်းလေးက အတော့်ကို လွယ်ကူမှာပါ။ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းစေဖို့ အားကစားသမားတော်တော်များများ ပြုလုပ်တတ်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူက အဆီတွေကိုလည်း အမြန်ကျစေတယ်လေ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်က ပုံမှန် ကြိုးခုန်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ခြေဖျားလေး ထောက်ထောက်ပြီး စုံခုန်ရမှာပါ။ ယောင်းက ခုမှ ကြိုးစခုန်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ၁ မိနစ်ခုန်၊ ၁ မိနစ်နား စနစ်နဲ့ သွားတာက ယောင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေမှာပါနော်…
တကယ်တော့ ကြိုးခုန်နည်းတွေကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ.. ဒါတွေကိုတော့ နောက်မှ အသေးစိတ် ပြောပြပေးမယ်နော်… ခုတော့ ကြိုးခုန်နည်း နမူနာလေးတွေကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါဦး..
Related Article >>> ကယ်လိုရီတွေလည်းကျ၊ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းစေမယ့် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း (၈)မျိုး
၃။ jumping jacks
ငယ်ငယ်တုန်းက ကွာစေ့ ကစားနည်း ကစားဖူးတယ်ဟုတ်? ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းက ယောင်းတို့အတွက် ကျိန်းသေလွယ်ကူမှာပါ။ လုပ်ပုံကလည်း လွယ်လွယ်လေးရယ်။
၁။ ခြေနှစ်ချောင်းကို စေ့ပြီး ရပ်ထားပါ။ လက်နှစ်ဖက်က ခန္ဓာကိုယ်ဘေးမှာ ကပ်ထားပါ။
၂။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဘေးကို ကားပြီး ခုန်လိုက်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ခေါင်းပေါ် မြှောက်တင်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း မူလကိုယ်နေဟန်ကို ပြန်သွားပါ။
ပြောသားပဲ ငယ်တုန်းက ကစားနည်းအတိုင်းပါပဲဆို 😀 တစ်ခု ရှိတာက လုပ်တဲ့အခါမှာ လက်တွေ မကွေးသွားစေနဲ့နော်.. လက်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလေး ထားပြီး ခုန်တဲ့အခါမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားပြီး ခုန်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ အသံမထွက်အောင် ခုန်ကြည့်ပါ။
ဒီနည်းလမ်းကလည်း (၁၀)မိနစ်ကို ကယ်လိုရီ(၁၀၀)လောက် (အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်) လောင်ကျွမ်းနိုင်တာမို့ တစ်နေ့ကို မိနစ်(၂၀)ပြုလုပ်ပေးရင်တောင် ကယ်လိုရီတွေ မနည်းဘူး ကျမယ်နော် 😀
၄။ squat jumps
တင်ပါးအလှအတွက် Squat ထိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ယောင်းတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ဒီ Squat ပုံစံနဲ့ နည်းနည်း ဆင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့..
၁။ Squat ထိုင်သလို ထိုင်ချလိုက်ပါ။ ပေါင်တွေက ကြမ်းပြင်နဲ့ ပြိုင်နေပါစေ။ ကျောတွေလည်း ဖြောင့်ထားဦးနော်..
၂။ ထိုင်နိုင်သလောက် ထိုင်ချပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ကိုဆန့်ပြီး ခုန်ထလိုက်ပါ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ လက်တွေကို ခေါင်းပေါ် မြှောက်လိုက်ပါ။
၃။ အောက်ကို ပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာ Squat ထိုင်တဲ့ အနေအထားအတိုင်း ပြန်နေလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အပေါ်ကအဆင့်တွေအတိုင်း ထပ်ကျော့ပြီး လုပ်ပါ။
Squat ထိုင်တာ၊ ခုန်တာနဲ့ ပြန်အကျမှာ Squat ပြန်ထိုင်တာ ဒီ ၃ ခု ပြီးတော့မှ ၁ခေါက်လို့ ရေပါတယ်နော်.. အဲဒီလိုမျိုးအခေါက်ရေ ၁၅ ခေါက်ကို ၃ ကျော့ လုပ်ပေးပါ။
စာကြီးပဲဖတ်လုပ်ရင်တော့ ယောင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တာမို့ ဗီဒီယိုလေးတွေလည်း ထည့်ထားပေးပါတယ်.… ဒါတွေက ပြောရမယ်ဆို နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြင့်စေတဲ့ Cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။ အဓိကက ကယ်လိုရီကို မြန်မြန်နဲ့ များများ လောင်ကျွမ်းစေတာမို့ အဆီတွေကျစေနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့.. အထပ်မြင့်ကနေတော့ မလုပ်မိစေနဲ့ယောင်းရေ(အလုပ်ကောင်းပြီး အောက်ထပ်ကမေတ္တာပို့ခံရမယ်နော်…:P)
လမ်းမှာဆိုရင်တော့ ပလက်ဖောင်းဘေးကနေ အလွယ်လှုပ်ရှားလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ စစလုပ်ခြင်း(၂)ရက်လောက်မှာ ခြေဖဝါးတွေအထိမခံနိုင်အောင်နာတတ်တာမို့ စလုပ်တာနဲ့ဒဏ်ကြေဆေးဆောင်ထားပါယောင်းရေ (အနာပေးပြီး ဆေးပေးတာပေါ့. )
ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လှပတက်ကြွတဲ့ ယောင်းလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ..
ဝိတျကပြွီးတအားလှသှားရငျ မငျမငျတို့ကို မမထေ့ားရဘူးနျော
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဝလာမှနျးလညျး ရိပျမိတယျ.. Gym သှားဖို့လညျးဘယျလိုမှ အခြိနျမပေးနိုငျ ၊ အိမျမှာဆော့ဖို့ ကပြွနျတော့လညျး စကျကိရိယာလိုတာနဲ့၊ ပုံစံမှားဆော့မိမှာ စိုးရိမျရတာနဲ့ ဟိုဟာ တှေးပူရတာနဲ့၊ ဒီဟာစိတျပူရတာနဲ့ အတှေးပေါငျးစုံတှကွေောငျ့ ဝသညျထကျ ပိုပိုဝလာတာကို ဒီတိုငျးလကျပိုကျကွညျ့နရတေဲ့နတှေ့ေ မြားနပွေီလား ယောငျးရေ…
ယောငျးတို့စိုးရိမျပူပနျမှုတှခြေုပျငွိမျးစနေိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို ဟောဒီကမငျမငျ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားပါသတဲ့ရှငျ …. ဒီနညျးလမျးလေးတှေ လုပျဖို့ တဈနကေို့မိနဈ(၂၀)အခြိနျပေးလိုကျရုံနဲ့ တဈကိုယျလုံးညီညီညာညာနဲ့ ဝိတျကသြှားစနေိုငျပါတယျတဲ့လေ… အဓိကကတော့ ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးသှားအောငျ လုပျရငျး အဆီတှကေိုေ လြှာ့ခပြေးလိုကျတဲ့ နညျးလမျးတှပေေါ့… ကဲ.. ဒါဆို ဘယျနညျးလမျးလေးတှလေညျး ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ…
Related Article >>> တငျဘေးသားတှေ ကားထှကျစမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး (၄) မြိုး
တျောတျောမြားမြားက ဒီနညျးလမျးကို ကွောကျကွပမေဲ့ ဒီနညျးလောကျထိရောကျတာလညျး ဒီနညျးလမျးပဲ ရှိတယျ ယောငျးရေ။ နရောလညျး သိပျမယူသလို ဘာကိရိယာမှမလိုဘဲ ကယျလိုရီမွနျမွနျလောငျကြှမျးစမှောပါ။ ဒါဆို ဘယျလို လုပျရမှာလဲ?
၁။ မတျမတျရပျနပေါ။ ဒိုကျထိုးတဲ့ ပုံစံအတိုငျး လကျနှဈဖကျကို ကွမျးပွငျပျေါ ထောကျလိုကျပါ။
၂။ ခွထေောကျနှဈဖကျကို နောကျကို အားနဲ့ကနျပွီး ဒိုကျထိုးတဲ့ပုံစံဖွဈအောငျ ပွငျလိုကျပါ။ (ကြောဖွောငျ့နပေါစနေျော.. )
၃။ နောကျမှာထောကျထားတဲ့ ခွထေောကျတှကေို အရှကေို့ ပွနျဆှဲယူလိုကျပါ။
၄။ မတျမတျပွနျရပျပါ။ ပွနျရပျတဲ့အခြိနျမှာ ခွဖြေားထောကျပွီး လကျတှကေိုပါ ဆနျ့ထုတျလိုကျပါ။ (လှယျလှယျပွောရရငျတော့ ခုနျနိုငျသလောကျ မွငျ့မွငျ့ခုနျလိုကျလညျး ရပါတယျ ယောငျးရေ.. ခုနျတဲ့အခါမှာ တဈကိုယျလုံး ဆနျ့ထားဖို့ လိုပါတယျ)
ဒါက အခွခေံအဆငျ့တှပေါ။ Burpees ဟာ အမွနျနှုနျးကို အခွခေံတာမို့ မွနျမွနျလုပျနိုငျလေ ကောငျးလပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဆန်ဒစောပွီး မွနျမွနျကွီးလညျး မလုပျလိုကျပါနဲ့ဦး။ စစလုပျခငျြးဆို နညျးနညျးလောကျ လုပျပွီးတာနဲ့ လူက ပွိုငျးကသြှားမှာ ကြိနျးသပေါပဲ 😛 လုပျနိုငျသလောကျ အရငျလုပျပါ။ နောကျပိုငျး အကငျြ့နညျးနညျးရသှားပွီဆိုရငျ တဈခါလုပျရငျ အခေါကျ ၅၀ လောကျ အနညျးဆုံး လုပျကွညျ့ပါ။ တဖွညျးဖွညျးတိုးရငျး ၁၀၀ လောကျထိ လုပျလညျး ရပါတယျနျော…
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးဟာ သာမနျလကေ့ငျြ့ခနျးတှထေကျ ၅၀% ပိုပွီး အဆီတှကေို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဇီဝဖွဈစဉျကိုလညျး တိုးမွှငျ့ပေးနိုငျတာကွောငျ့ ကယျလိုရီတှကေိုလညျး ပိုပွီး လောငျကြှမျးပေးနိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… လကျမောငျး၊ ရငျဘတျ၊ ပေါငျအတှငျးသား၊ တငျပါး၊ တံခေါကျကွောနဲ့ ဗိုကျကွှကျသားတှကေို ကဈြလဈြသနျမာစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
ယောငျးက ငယျငယျလေးတညျးက ကွိုးခုနျဝါသနာပါခဲ့ရငျတော့ ဒီနညျးလေးက အတေျာ့ကို လှယျကူမှာပါ။ ကယျလိုရီလောငျကြှမျးစဖေို့ အားကစားသမားတျောတျောမြားမြား ပွုလုပျတတျတဲ့ နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး သူက အဆီတှကေိုလညျး အမွနျကစြတေယျလေ.. ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ ငယျငယျက ပုံမှနျ ကွိုးခုနျတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ ခွဖြေားလေး ထောကျထောကျပွီး စုံခုနျရမှာပါ။ ယောငျးက ခုမှ ကွိုးစခုနျတဲ့သူဆိုရငျတော့ ၁ မိနဈခုနျ၊ ၁ မိနဈနား စနဈနဲ့ သှားတာက ယောငျးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွစေမှောပါနျော…
တကယျတော့ ကွိုးခုနျနညျးတှကေလညျး အမြိုးမြိုး ရှိပါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ.. ဒါတှကေိုတော့ နောကျမှ အသေးစိတျ ပွောပွပေးမယျနျော… ခုတော့ ကွိုးခုနျနညျး နမူနာလေးတှကေို ဒီမှာ ကွညျ့လိုကျပါဦး..
Related Article >>> ကယျလိုရီတှလေညျးကြ၊ ကနျြးမာရေးလညျး ကောငျးစမေယျ့ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျး (၈)မြိုး
ငယျငယျတုနျးက ကှာစေ့ ကစားနညျး ကစားဖူးတယျဟုတျ? ဒါဆိုရငျတော့ ဒီနညျးလမျးက ယောငျးတို့အတှကျ ကြိနျးသလှေယျကူမှာပါ။ လုပျပုံကလညျး လှယျလှယျလေးရယျ။
၁။ ခွနှေဈခြောငျးကို စပွေီ့း ရပျထားပါ။ လကျနှဈဖကျက ခန်ဓာကိုယျဘေးမှာ ကပျထားပါ။
၂။ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ဘေးကို ကားပွီး ခုနျလိုကျပါ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ လကျနှဈဖကျကိုလညျး ခေါငျးပျေါ မွှောကျတငျလိုကျပါ။
၃။ ပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြး မူလကိုယျနဟေနျကို ပွနျသှားပါ။
ပွောသားပဲ ငယျတုနျးက ကစားနညျးအတိုငျးပါပဲဆို 😀 တဈခု ရှိတာက လုပျတဲ့အခါမှာ လကျတှေ မကှေးသှားစနေဲ့နျော.. လကျကို ဖွောငျ့ဖွောငျ့တနျးတနျးလေး ထားပွီး ခုနျတဲ့အခါမှာလညျး ခန်ဓာကိုယျကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထားပွီး ခုနျပါ။ တတျနိုငျသမြှ အသံမထှကျအောငျ ခုနျကွညျ့ပါ။
ဒီနညျးလမျးကလညျး (၁၀)မိနဈကို ကယျလိုရီ(၁၀၀)လောကျ (အကွမျးဖဉျြးအားဖွငျ့) လောငျကြှမျးနိုငျတာမို့ တဈနကေို့ မိနဈ(၂၀)ပွုလုပျပေးရငျတောငျ ကယျလိုရီတှေ မနညျးဘူး ကမြယျနျော 😀
တငျပါးအလှအတှကျ Squat ထိုငျတယျဆိုတာတော့ ယောငျးတို့သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဒီနညျးလမျးက ဒီ Squat ပုံစံနဲ့ နညျးနညျး ဆငျပါတယျ။ ဘယျလိုလုပျရမှာလဲဆိုတော့..
၁။ Squat ထိုငျသလို ထိုငျခလြိုကျပါ။ ပေါငျတှကေ ကွမျးပွငျနဲ့ ပွိုငျနပေါစေ။ ကြောတှလေညျး ဖွောငျ့ထားဦးနျော..
၂။ ထိုငျနိုငျသလောကျ ထိုငျခပြွီးတာနဲ့ ကိုယျကိုဆနျ့ပွီး ခုနျထလိုကျပါ။ တဈပွိုငျတညျးမှာပဲ လကျတှကေို ခေါငျးပျေါ မွှောကျလိုကျပါ။
၃။ အောကျကို ပွနျကလြာတဲ့အခါမှာ Squat ထိုငျတဲ့ အနအေထားအတိုငျး ပွနျနလေိုကျပါ။ ပွီးတော့ အပျေါကအဆငျ့တှအေတိုငျး ထပျကြော့ပွီး လုပျပါ။
Squat ထိုငျတာ၊ ခုနျတာနဲ့ ပွနျအကမြှာ Squat ပွနျထိုငျတာ ဒီ ၃ ခု ပွီးတော့မှ ၁ခေါကျလို့ ရပေါတယျနျော.. အဲဒီလိုမြိုးအခေါကျရေ ၁၅ ခေါကျကို ၃ ကြော့ လုပျပေးပါ။
စာကွီးပဲဖတျလုပျရငျတော့ ယောငျးအတှကျရှုပျထှေးသှားနိုငျတာမို့ ဗီဒီယိုလေးတှနေဲ့ တှဲကွညျ့ပေးပါနျော… ဒါတှကေ ပွောရမယျဆို နှလုံးခုနျနှုနျးကို မွငျ့စတေဲ့ Cardio လကေ့ငျြ့ခနျးတှပေါပဲ။ အဓိကက ကယျလိုရီကို မွနျမွနျနဲ့ မြားမြား လောငျကြှမျးစတောမို့ အဆီတှကေစြနေိုငျမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှပေေါ့.. ထပျမွငျ့ကနတေော့ မလုပျမိစနေဲ့ယောငျးရေ(အလုပျကောငျးပွီး အောကျထပျကမတ်ေတာပို့ခံရမယျနျော…:P )
လမျးမှာဆိုရငျတော့ ပလကျဖောငျးဘေးကနေ အလှယျလှုပျရှားလို့ရနိုငျပါသေးတယျနျော။ စစလုပျခွငျး(၂)ရကျလောကျမှာ ခွဖေဝါးတှအေထိမခံနိုငျအောငျနာတတျတာမို့ စလုပျတာနဲ့ဒဏျကွဆေေးဆောငျထားပါယောငျးရေ (အနာပေးပွီး ဆေးပေးတာပေါ့. )
ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လှပတကျကွှတဲ့ ယောငျးလေးတှေ ဖွဈနိုငျကွပါစေ..
တွဲဖက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေမယ့် စားစရာ အတွဲ (၄) မျိုး
Ana April 19, 2019
Ana June 20, 2019
Ana June 14, 2019
Ana June 12, 2019
Ana June 10, 2019
Ana June 2, 2019